Senior Auditor Archives - Glory Assumption Space
Senior Auditor - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်
Senior Auditor - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ။ • Experience of at least3Years in Auditing. • Bachelor’s Degree in Economic (BCom, B. Act) • Must have LCCI Level (III), ACCA, CPA (Studying) • Age (Over 25 Yrs Old) • Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) • Good Communication in English • Office Hours 8:30 AM to 5:30 PM • Saturday , Sunday and Public Holiday Off • ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ Microfinance Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောာင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ Microfinance Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 ,09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Auditor – Male / Female – (5) Posts – လစာ - ညှိနှိုင်း
Location in : Myaynigone
GAS Recruitment ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အိမ်သုတ်ဆေးဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ၁) Senior Auditor – Male / Female – (5) Posts – လစာ - ညှိနှိုင်း - စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • BCom , ACCA ( သို့ ) CPA ဖြစ်လျှင် ဦးစားပေးမည် ။ • Accounting , Financial Analysis ( သို့ ) Financial Reporting ပိုင်းဖြင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ်ရှိရမည် ။ ( သို့ ) • Internal Audit လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၄ ) နှစ်ရှိလျှင်လည်း အဆင်ပြေပါသည် ။ • ERP ( သို့ ) SAP System ( သို့ ) Accounting System တစ်ခုခုကိုသိရှိရမည် ။ • လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တခါတရံ ခရီးသွားလာနိုင်ရမည် ။ • Microsoft Word / Email / Internet ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈:၃၀ ) မှ ညနေ ( ၄:၃၀ ) • တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။ • အိမ်သုတ်ဆေးဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Auditor – Male/Female (5 Posts)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 3. Senior Auditor – Male/Female (5 Posts)/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level (III) ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Senior Auditor - Male/Female (7) Posts / Salary 700000 Kyats
************** URGENT REQUIREMENT *************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1.	Senior Auditor - Male/Female (7) Posts / Salary 700000 Kyats / Dagon Township Requirements -	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။(B.Com , Diploma Accounting ,etc…) ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ -	Computerized Accounting & IT Knowledge ရှိရမည်။ -	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၄)နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။ -	အသက် (၂၅) နှစ် - (၃၀)နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။ -	English4Skill ရ ရမည်။ MYOB ,Microsoft Word & Excel တို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိင်ရမည်။ -	Audit ပိုင်းကို Advanced Level ရှိရမည်။ -	လိုအပ်ပါကအချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ -	Under Pressure အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )